"Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa Waliin Gahe Jedhamuu Irra Hin Geenye"
Waldaan Fayyaa Addunyaa, ka Tokkummaa Mootummootaa namoonni vaayiresichaan qabaman biyya hedduu keessatti mul’ataniyyuu, sadarkaa “Pandemic” yokaan kan lafa bal’eensa waliin gahe jedhamuu irra hin geenye jedha.
Lakkoobsi namoota haaraa Vaayiresii Koronaan qababamnii fi lakkoobsi dhibee vaayiresichaatti hidhata qabuun du’anii Chaayinaa keessatti dabaluu isaa, aangawaan Ministirii Fayyaa Chaayinaa beeksisanii jiran. Gama biraatiin immoo, biyya lafaa bal’eensa Chaayinaa dhaa alattis faca’inni vaayiresichaa dabaleen isaa gabaasamee jira.
Tahus garuu, Waldaan Fayyaa Addunyaa, ka Tokkummaa Mootummootaa jedhutti immoo, namoonni vaayiresichaan qabaman biyya hedduu keessatti mul’ataniyyuu, sadarkaa “Pandemic” yokaan kan lafa bal’eensa waliin gahe – jedhamuu irra hin geenye.
Gabaasaan Roobii har’aa bahe akka agarsiisutti, irra-caalaan isaa, lafa bal’eensaa Chaayinaa irraa ka tahe, jalqaba irraa eegalee hanga ammaatti lakkoobsi namoota Vaayiresii Koronaan du’anii yoo xiqqaate 490. Baatii Mudde dabree kutaa giddu-gala Chaayinaatti argamtu, ka Wuhaan jedhamtu keessatti vaayiresichi nama irratti mul’atee as, lakkoobsi namoota qabamanii kuma kudha afur caalee jira. Kana malees, biyyoota kaan 23 keessatti namoonni gara 150 qabamuu tu mirkanaawe.